Musangano Wemusangano Solution | Brocade Smart Space Technology Co, Ltd.
Imba yemazuva ano yemusangano izere nevanhu vane zvishandiso zvakasiyana zvine mhando dzakasiyana dzekushandisa. Ivo vese vachazoda kubatana, kupa uye kubatana. Izvo zvinodikanwa izvi kubatana zviri pakarepo uye zvine hungwaru nekugadzikana kwedata kufambisa uye nyore kugovana.
Brocade inopa ese-akatsigira wired uye isina waya mhinduro dzebhizinesi nevehukama vanobatana. Isu tinoshandisa tekinoroji yeHDMI kushandura imba yako yemusangano kuti ive nzvimbo inoshanda uye inobudirira yekushandira.
Wired Solution: Musangano Wemukati Solution ine 4K HDMI Extender kit
Iyo Brocade 4K HDMI Extender-DK02 wired musangano mukamuri mhinduro yakagadziriswa kuti ive inokwanisika, nyore-kuisa, inonzwisisika kushandisa, uye zvine simba inoshanda sehurukuro uye kamuri odhiyo-inoona chiratidzo chiratidzo manejimendi mhinduro. Mhinduro yacho inouya neyemuchina wedesktop ine 1 HDMI yekuisa, yakagadzika pamadziro inogamuchira ine 1 HDMI kuburitsa, 2 maadapter uye 1 Cat5e / 6 tambo yekubatanidza. Mhinduro iyi inosanganisira sosi sosi senge komputa ine 1 HDMI chiteshi kubva pakombuta uye chiratidziro chine 1 HDMI doko kune vanopinda musangano. Tsanangudzo ndiyo inotepfenyura inobatanidza komputa ne1 HDMI tambo uye inobatanidza inogamuchira ne1 Cat5e / 6 tambo, nepo inogamuchira ichibatanidza kuratidzwa pamusoro pe1 HDMI tambo uye inobatanidza inotumira pamusoro peiyo imwechete Cat5e / 6 tambo. Iine tekinoroji yeHDMI, kit yacho inogona kuendesa vhidhiyo ye4K / 60hz UHD kuenda pamamirimita makumi mapfumbamwe nemanomwe apo masendimita gumi nemasere anokwanisa kuenda kusvika pamamita makumi matatu nepfumbamwe. Iyo DK02 wired musangano mukamuri mhinduro inotsiva maawa ekugadzira uye yekumisikidza basa uye iri mhinduro yakakwana kune yemakambani AV tekinoroji musika.
Wireless Solution: Musangano Kamuri Solution ine Wireless HDMI extender kit
Iyo Brocade isina waya HDMI extender kit-CTS200 isina waya yemusangano kamuri mhinduro mhinduro yakanaka yemakamuri emusangano. Mhinduro yacho inouya neyemuchina wedesktop ine 1 HDMI yekuisa, yakagadzika pamadziro inogashira ine 1 HDMI kuburitsa uye maviri maadapter. Mhinduro iyi inosanganisira sosi sosi senge komputa ine 1 HDMI kubva kudesktop uye chiratidziro chine 1 HDMI yevanopinda musangano. Tsanangudzo ndiyo inotumira inobatanidza komputa ne1 HDMI tambo nepo inogamuchira ichibatanidza kuratidzwa pamusoro pe1 HDMI tambo. Iine HDMI uye isina waya WIFI tekinoroji, iyo kit inogona kuendesa 4K / 30hz UHD vhidhiyo kuenda kuma1977 tsoka apo iwo 1080p masendi anogona kuenda kusvika kusvika 656 tsoka. Zviri nyore kwazvo kushandisa. Ingovhara uye utambe. Hapana mutyairi wekumisikidza anodikanwa. NeCTS200 unogona kugovana zviri pamadhigiri ako akasiyana pane skrini yekuratidzira nekamwe chete.